1.【Isilawuli Esithuthukisiwe Senkampani Yasesithathu Esinsundu】 Lena indawo yesithathu ye-p-s4, hhayi isilawuli esisemthethweni.Isilawuli esingenantambo se-LITTJOY sisebenzisana kakhulu ne-P-S4/Slim/P-S4 Pro/Android OS/PC(Win7/8/8.1/10).Amahora omdlalo onethezekile onama-grips aklanywe ngokwe-ergonomically.
2.【Umuzwa Omangalisayo Wokudlala Amageyimu】Isilawuli esinembayo sithuthukisiwe ukuze sinikeze abadlali ukulawula kwayo yonke imidlalo kukhonsoli yamageyimu.Isilawuli Esingenantambo sinesipika esakhelwe ngaphakathi kanye nojeke wamahedisethi, okubeka izinketho eziningi zomsindo ezintsha ezandleni zomdlali.Ijekhi yomsindo engu-3.5mm inikeza isixazululo esisebenzayo somsindo womuntu siqu sabadlali abafuna ukulalela imidlalo yabo ngasese.
3.【I-Double Vibration & Motion Control】Isilawuli esikude esinsundu se-PS4 esakhelwe ngaphakathi esakhelwe ngaphakathi, esifakwe ubuchwepheshe besilawuli se-joystick se-PS4 sokushaqeka kabili, sikunikeza ulwazi lwangempela lokudlala kumageyimu akho owathandayo.Isistimu yokulawula ukunyakaza ezwela kakhulu izwa konke umnyakazo wakho futhi abalingisi kanye nezinto ezisegeyimu zizonyakaza futhi zisabele njengoba utshekisa, uphusha futhi unyakazisa isilawuli segeyimu ye-PS4 engenantambo.
4.【Ibhethri Elakhelwe ngaphakathi elingu-1000 mAh】Lesi silawuli se-ps-4 sinebhethri eyakhelwe ngaphakathi engu-1000 mAh eshajwa kabusha.Idinga kuphela ukushaja amahora angu-2 ukuze inikeze amahora angu-8-10 wesikhathi segeyimu.
5.【Isipho Esikhethekile Nesimangalisayo】Isilawuli se-ps4 esingenantambo singaba izipho ezihamba phambili zosuku lokuzalwa lomngane nanoma yimuphi umkhosi, njenge-Halloween, i-Thanksgiving, uKhisimusi, njll.
Isilawuli se-gamepad se-P4 senziwe kahle ngomuzwa wakho omuhle kakhulu wokudlala.Isakhiwo esithuthukisiwe senkinobho nezinti ze-analog ezimbili ezizwela kakhulu zingathuthukisa ukunemba kwezikhathi ezibucayi, futhi zenze igeyimu ibe lula kuyilapho kunciphisa isikhathi sokuphendula.
Ukunemba Control Trigger
Umumo nokuzwela kwe-trigger kuthuthukisiwe ukuze isebenze kangcono, iletha okufunayo emdlalweni wakho.
Inkinobho yokwabelana yenza ukuxhumana nabantu kube lula ngevidiyo yokudlala esheshayo nokulayishwa kwesikrini
Iphedi yokuthinta esekela ukuthinta okuningi ivula amathuba amasha okudlala, isilawuli semidlalo ye-premium kufanele sibe naso kubadlali bangempela.
Isilawuli singakunikeza impendulo esheshayo yokudlidliza ngesikhathi igeyimu ihlangabezana nokuhlaselwa nokushayisana ngenxa yamamotho ama-2 akhelwe ngaphakathi ashaqisayo.
Jabulela ubumnandi bemidlalo yabadlali abaningi
Izici eziyinhloko:1.Yabelana ngomsebenzi: Dlala imidlalo yakho ngendlela ethokozisayo, wabelane ngomzuzu wakho ojabulisa kakhulu wesiqeshana sevidiyo noma isithombe-skrini ngokucindezela inkinobho eyodwa.2.Kuyahambisana Isidlo sakusihlwa: Sebenza ku-PS4/PS4 pro/Slim/Android/PC, dlala umdlalo owuthandayo ngalesi silawuli segeyimu.3.Ukulawula Ukunemba: Izinti ze-analogi ezithuthukisiwe nezinkinobho zokucupha, zigcine zilawula ngakho konke umnyakazo.4.Ukudlala Isikhathi Eside: Ukudlala igeyimu ngokuqhubekayo kufika emahoreni angu-10 ngebhethri eyakhelwe ngaphakathi engu-800mAh ngemva kokushajwa ngokugcwele.5.Inzwa Yokunyakaza: Sekela imidlalo ngesistimu yezinzwa engu-6-eksisi, jabulela amageyimu amnandi kakhulu.6.I-Audio Jack: Ijekhi yesitiriyo engu-3.5mm eyakhelwe ngaphakathi, jabulela imidlalo yakho endaweni entsha.7.Imbobo yesandiso ingakhokhiswa ishaja yethu yesilawuli se-ps4.
AMANOTHI:1.uma isibambo singajwayelekile , singasethwa kabusha ngokucindezela ukhiye wokusetha kabusha ngemuva kwesilawuli.2.Isilawuli se-ps4 esingenantambo siwumkhiqizo wenkampani yangaphandle, Akuwona Umkhiqizo Woqobo ovela ku-SONY.3.Sicela udlale igeyimu ngenkathi ushaja ngokugcwele.Iphakheji
okuqukethwe:1 xPS4 Controller;1 x USB Cable;1 x Incwadi Yomsebenzisi
Okwedlule: I-DOSLY Gamepad Controller ye-PS4, Isilawuli se-PS4 Esingenantambo Sihambisana ne-PS4/Slim/Pro (Mnyama)
Olandelayo: I-DOSLY Wireless Controller Iyahambisana ne-PS 4/Pro Console/Slim/PC/Android/IOS 13 ene-Dual Vibration, Touch Pad, Bluetooth, Stereo Headset Jack, Six Axis Motion Control, Orange Rechargeable
I-PS-4 Wireless Controller Ihambisana ne-PS-4/P...
Isilawuli Esingenantambo se-PS4, Ukumiselela I-PS...